carbon steel isikwele isikwele ipayipi nokupakisha umshini kusuka Teneng HGF200 - China Shijiazhuang Teneng
carbon steel isikwele isikwele ipayipi nokupakisha umshini kusuka Teneng HGF200
Mfushane Isingeniso Umshini isetshenziswa beka futhi ukupakisha umkhiqizo osuphelile emgqeni ukukhiqizwa ipayipi. Ngaphandle operation manual, umshini ugijima ngokuzenzakalelayo, olwathuthukisa kahle ukukhiqiza eningi. It iqeda ongqongqozayo umsindo, umonakalo, nokuphepha kufihlwe ingozi, futhi ezithuthukisa umkhiqizo futhi kwehlisa phansi izindleko zokukhiqiza. Ukuze kuhlangatshezwane nesidingo ezifuyiwe ezishintshayo emgqeni ukukhiqizwa ipayipi, Esikuncela iphuzu enamandla imishini kwezilwandle nokuthuthukisa ke Innova ...
Umshini isetshenziswa beka futhi ukupakisha umkhiqizo osuphelile emgqeni ukukhiqizwa ipayipi. Ngaphandle operation manual, umshini ugijima ngokuzenzakalelayo, olwathuthukisa kahle ukukhiqiza eningi. It iqeda ongqongqozayo umsindo, umonakalo, nokuphepha kufihlwe ingozi, futhi ezithuthukisa umkhiqizo futhi kwehlisa phansi izindleko zokukhiqiza.
Ukuze kuhlangatshezwane nesidingo ezifuyiwe ezishintshayo emgqeni ukukhiqizwa ipayipi, Esikuncela iphuzu enamandla imishini kwezilwandle nokuthuthukisa ke ezintsha. Umshini sinezici ubuchwepheshe obusezingeni eliphakeme nokwethenjelwa bazakhele isimo compact nababonelelayo, inqubo ovuthiwe, futhi elula operation yesondlo. Kuqhathaniswa umshini kwezilwandle, ukusebenza ukuze intengo ratio umshini yethu ephakeme.
Okuzenzakalelayo kuhlinzwa round & square ipayipi nokupakisha ...
Semi-auto ipayipi nokupakisha umshini
Round ipayipi nokupakisha umshini
Ensimbi Round ipayipi umshini nokupakisha DB76
DB127 okuzenzakalelayo kuhlinzwa round & square ipayipi p ...
DB76 Ensimbi Round ipayipi nokupakisha umshini